PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-21 - Iningi aliyizwa eyeSilo ne-AfriForum
Iningi aliyizwa eyeSilo ne-AfriForum
Isolezwe ngeSonto - 2018-10-21 - IMIBONO -
Unyaka ka-2018 okuwunyaka lapho iSilo Samabandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu sigubha iminyaka engu-70 sidla anhlamvana, uzongena emlandweni njengomunye weminyaka ebe yingqophamlando.
Lokhu kulandela isimemezelo esenziwe uNgangezwe Lakhe emcimbini weLembe, inkosi uShaka kaSenzangakhona sokuthi uzosebenzisana ne-AfriForum kwezolimo. Lokhu kwaqinisekiswa yisikhulu esiphezulu se-AfriForum uMnuz Kallie Kriel.
Sekube nemibono eyahlukene ngalesi sinyathelo. Abanye abaningi lokhu bakuthatha ngokuthi iSilo sesiqala ukuzimbandakanya kwezombusazwe.
Abanye bathi ukusebenzisana kweSilo nehlangano ephethwe ngabamhlophe iningi labo elisadla ngoludala, kusho ukuthengisa ngesizwe sakhe okaBhekuzulu. Kukhona nabathi iSilo sizimisele ukwenza noma yini ukuze sivikele umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust.
Okunye okuphawulekayo, wumuzwa othi lena yindlela iSilo esikhombisa ngayo ukuthi asinalo ithemba ngohulumeni oholwa yi-ANC, ukuthi uyabuhlonipha ubukhosi bakwaZulu nalobo obungobakwezinye izizwe ezakhele iNingizimu Afrika.
Uma kuyiqiniso ukuthi izwe lethu lizama ukugqugquzela ukubuyisana phakathi kwezinhlanga ezahlukene, lokho kusho ukuthi iSilo siwubambe kahle umgqigqo.
Asilibhekanga ibala lamalungu e-AfriForum. Esikhundleni salokho sibheke ukuthi ukulwa kwe-AfriForum ngodaba lomhlaba kufana ncamashi nokulwa kweSilo sizama ukuvikela Ingonyama Trust.
Okunye, izwe lethu likhala ngokuntuleka kokudla ngenxa yokuthi umhlaba omkhulu awusalinywa njengoba abantu balokhu befudukela emadolobheni.
Ukuze ukudla kuhlale kukhona iSilo sithathe isinqumo sokusebenzisana ne-AfriForum ngenhloso yokukhiqiza ukudla. Kodwa-ke kufanele singakhohlwa ukuthi umhlaba omkhulu ongaphansi kweNgonyama
Trust awukulungele ukukhiqiza ukudla.
Okunye, kunomuzwa othi kunabathile kuKhongolose abakhombisa ukungabanaki abavoti.
Ngenxa yokuthi iSilo sihola abantu abaningi, sinawo amandla okuba nomthelela okhethweni lwango-2019. Kodwa-ke uma iSilo singatshela abantu baso ukuthi bangayivoteli i-ANC ngoba kuyiyona ephethe udaba lomhlaba lokho sekungasho ukuthi oNgangezwe Lakhe usengene kwezombangazwe nokuyinto engamehlisa isithunzi.
Times ngeSonto eledlule libize iSilo ngo“Mampara.” Nakuba umbhali walolu daba wayesebenzisa ilungelo lakhe, iqiniso elingephikwe ukuthi walisebenzisa kabi ngokwehlisa isithunzi seSilo.
Ukubukela phansi iSilo kusho ukubukela phansi amaZulu onkana okuyinto engasusa uthuli lwezichwe.
Owami umbono uthi uma sihlaziya udaba lokusebenzisana kwe-AfriForum neSilo kufanele lokho sikwenze ngomqondo ovulekile singaphakamisi imimoya.
Lokho kuyosinikeza ithuba elanele lokubheka lolu daba nxazonke. Uma siluthatha ngokuxhamazela singazithola sesifaka kakhulu ipolitiki, kugcine sekulimala nabantu abangenacala. Emaqenjini ezombusazwe, iqembu elingalimala kakhulu kungaba yi-ANC ngoba yiyona esingethe udaba lomhlaba.
Mangigcine ngokusho ukuthi njengoba i-ANC ibhekene nezingqinamba eziningi njengeqembu kubalulekile ukuthi lokho engakwazi ukukulungisa isheshe ikulungise ukhetho lungakafiki.
Phakathi kwezinselelo ezibhekene ne-ANC eyiqembu elibusayo ukucacisa ngodaba lomhlaba. Izinkulumo zikaMnuz Kgalema Motlanthe aziyisizi neze i-ANC ngodaba lomhlaba. Yingakho-ke kufanele isheshe iphumele obala kungaze konakale kakhulu kunalokhu kweAfriForum.
*USolwazi Bheki R. Mngomezulu usophikweni lwezifundo zepolitiki e-University of Western Cape. Ungumhlaziyi ozimele